Zuva Rokutanga reChikoro | Kudzidzira chiGerman, Kudzidza chiGerman
musha » German News » Zuva rekutanga reChikoro
1 Zuva rekutanga reChikoro
2 Kufambisa kweruzhinji kwakasununguka pazuva rekutanga rechikoro muIstanbul
3 Matanho anotorwa pazuva rekutanga reChikoro
Pfungwa yeZuva rekutanga reChikoro yaive Google Doodle.
Saka chii chiri pazuva rekutanga chikoro?
Kufambisa pachena kwevanhu paruzhinji muIstanbul pazuva rekutanga rechikoro
9 ichatanga gore idzva redzidzo muIstanbul. Zvinoenderana neIstanbul Metropolitan Municipality, bhazi, metrobus, njanji njanji uye nzendo dzegungwa zvichawedzerwa. Vabereki vanoda kuenda nevana vavo kuchikoro pazuva rekutanga vanenge vatakura bhazi rechikoro.
Mumaguta makuru, masisitimu ese achange akatarisisa kutaridzika zvakanaka.
Mune chirevo, "Pedestrian Kutanga" uye "Ndiri Anotyaira kutyaira" zviratidzo uye zviratidzo zvapera kuzodzivirira tsaona dzemumigwagwa muzvikoro. Nyaya dzese dzinodzivirira kutenderera dzinobviswa, ipapo zvidzidzo zvichatangwa zvishoma nezvishoma, zvidzidzo zviripo zvinopedzwa zuva rekutanga rechikoro risati ranyorwa.
Matanho anotorwa pazuva rekutanga rechikoro
Gadzirira mwana wako chikoro mupfungwa uye nepfungwa.
Tsanangudza kwaari kuti zvakajairika kuti ashushikane uye kunetseka mumavhiki ekutanga. Ive neshuwa kutaura nezvayo usati watanga chikoro.
Ita kuti hutano hwepanyama uye hwepfungwa hutarise. Rongedza kubvunzurudzwa kwepfungwa uye chiremba wezvechiremba wezvechiremba wemaziso, chiremba wemaziso uye chiremba wemazino kana zvichidikanwa.
Rongedza nguva yako yekurara uye yekudya panguva dzinopfuura kwevhiki zvikoro zvisati zvavhurwa. Edza kuyera nguva yaanoshandisa kuterevhizheni uye pakombuta. Muzhizha nguva idzi dzinogona kuwedzera. Nekudaro, zvikoro izvi zvinofanirwa kudzikiswa kana zvichizarura zvikoro.
Tora zvishandiso zvekudzidzisa izvo zvinogona kuvandudza yako kosi kukurudzira. Enda kuchikoro pamwe chete uyeremekedza sarudzo dzake nepamunogona napo.
Goverana makore ako evadzidzi. Uku kugovana kunoshanda kupfuura kuvapa zano.
KUFUNGA IZVI: Izvi zvakagadzirirwa hazviiti
Isu tinoshuvira kuti zuva rekutanga rechikoro uye gore idzva redzidzo ribatsire munhu wese.
Kurasikirwa Kwebvudzi Kunokonzera uye Kurapa